कस्तो अचम्म ! आमाकै अगाडि छोरीको सुहागरात – Samabeshi Khabar
कस्तो अचम्म ! आमाकै अगाडि छोरीको सुहागरात
११ चैत्र २०७७, बुधबार १४:१६ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । हामी यौन भन्ने बित्तिकै लजाउने गर्छौ। तर मानवजातिका लागी यौन आवश्यक कुरा हो ।
हाम्रो समाजमा एक अर्कामा यौन सम्बन्धि कुरा गर्न अप्ठ्यारो मनिन्छ । यौनको कुरा गरेमा अश्लिल मान्ने गरिन्छ । आमाबुवाका अगाडि यौनसम्बन्धि कुरा गर्नु त झन राम्रो मानिदैन । तर यस्तो देश पनि छ जहाँ आफ्नो आमाबुवाको अगाडी यौनको कुरा गर्न लजाइदैन ।कोलम्बियामा एक अनौठो परम्परा छ, जहाँ आमाकै अगाडि छोरीले सुहागरात मनाउने गर्छिन् । हामिकहाँ सुहागरातको कुरा गोप्य राखिन्छ र कुरा अरुलाई खोल्नु असभ्य पनि मानिन्छ । तर यो परम्परामा सुहागरातको समयमा आमालाई साक्षी राख्नुपर्छ ।
यो परम्परामा बिहेपछी पतिसँग छोरीले आमाकै अगाडि सुहागरात मनाउनुपर्छ । जब सम्म सुहागरात सकिदैन आमा कोठा भित्रै हुन्छन् । छोरीले आमाकै अगाडि सुहागरात मनाएपछी मात्रै छोरीको विदाइ गरिन्छ । यस्तो अनौठो परम्परा फ्रन्समा पनि छ । फ्रन्समा पनि बिबाहपछी दुलाहा दुलही सुहागरात मनाउदा घर र छिमेकीले भाडा बजाएर होहल्ला गर्ने गर्छन् । यस्ता अनौठा परम्पराहरु विश्वका विभिन्न देशमा छन् । जुन हामिलाई थाहा पनि हुँदैन। एजेन्सीबाट